Dowladda oo shaacisay Tirada dad hor leh oo laga helay Cudurka COVID-19 | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dowladda oo shaacisay Tirada dad hor leh oo laga helay Cudurka COVID-19
Dowladda oo shaacisay Tirada dad hor leh oo laga helay Cudurka COVID-19
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta Feyruska Karoona ku sheegtay in la diiwaan geliyay 105 xaalado cusub oo COVID-19 ah 24-kii saac ee la soo dhaafay, 9 qof ayaa u geeriyootay, waxaana ka bogsatay 64 ruux.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa caddeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay Puntland (60), gobalka Banaadir (38), Somaliland (5), iyo Galmudug (2) qof ah, 51 ka mid ah bukaannada la xaqiijiyay waa rag, halka 54-na ay yihiin haween.
Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 16,892 waxaa bogsootay 8,141 Ruux. guud ahaan 927 ruux oo kale ayaa u geeriyootay cudurka.
Maqaal horeAl-shabaab oo weerar ku bilowday Qarax Is-miidaamin ah ku qaaday Cammaara
Maqaal XigaGuddiga dib u eegista Habraaca Doorashada oo Maanta kulan yeelanaya